Ways to reduce stretch marks in pregnant women - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
Ways to reduce stretch marks in pregnant women
ကိုယျဝနျဆောငျတို့ ဗိုကျကွောပွတျတာသကျသာဖို့ လိုကျနာဖှယျရာအခကျြ (၆)ခကျြ
ကိုယျဝနျဆောငျတို့ အကွောပွတျခွငျးဟာ ဗိုကျအပွငျ ပေါငျ၊ တငျပါးနဲ့ အခြို့ ရငျညှနျ့နားထိရှိတတျကွပါတယျ။ ဒီလိုအကွောပွတျတာ သကျသာဖို့အတှကျ ဆောငျရနျအခကျြ (၆)ခကျြရေးသားလိုကျရပါတယျ။
ကိုယျအလေးခြိနျမြားလလေေ ဝလလေေ ဗိုကျကွောပွတျမှုမြားလလေဖွေဈတဲ့အတှကျ ခန်ဓာကိုယျဝိတျအရမျးမတကျစအေောငျကွိုးစားပါ။ အနတေျောကိုယျအလေးခြိနျတဈခုရအောငျ အစားအသောကျ၊ လကေ့ငျြ့ခနျးတို့နဲ့ထိနျးညှိပေးပါ။
၂. သငျ့ခန်ဓာကိုယျမှာ ရဓောတျလုံလုံလောကျလောကျရှိနပေါစေ
ရဟော သဘာဝကပေးတဲ့အကောငျးဆုံး ဆေးတဈခှကျလို့ဆိုရငျ မှားမယျမထငျပါဘူး။ တဈနတေ့ဈနကေို့ အနညျးဆုံး ရေ နှဈလီတာခှဲခနျ့ ပုံမှနျသောကျသုံးပေးမယျဆိုရငျ အသားအရကွေညျလငျပွီး အမာရှတျမြားကိုအထိုကျအလြောကျသကျသာစမှောပဲဖွဈပါတယျ။
သငျ့ရဲ့အစားအစာထဲမှာ ဗီတာမငျဓာတျလုံလုံလောကျလောကျပါရဲ့လား။ ဗီတာမငျ စီ၊ ဗီတာမငျ ဒီ နဲ့ ဗီတာမငျ အီး တို့ဟာ အသားအရပွေုပွငျထိနျးသိနျးရာမှာ အလှနျအထောကျအကူပွုတဲ့ဓာတျတှဖွေဈတာမို့ ဒီဓာတျတှပေါတဲ့အစားအစာမြားကို စားသုံးပေးရမှာပါ။ ဒါ့အပွငျ သှပျဓာတျနဲ့ ပရိုတငျးဟာလညျး အမာရှတျသကျသာရနျအထောကျအကူပွုတဲ့အတှကျ အသားဓာတျလဲလုံလောကျဖို့လိုအပျပါတယျ။
၄. ဗီတာမငျ စီ
ကျောလဂငျြ (Collagen)ဓာတျဟာ အသားအရတှေနျ့ခွငျး နဲ့ အကွောပွတျရာမြားကို မဖွဈပှားအောငျ၊ ရှိလကျစအကွောပွတျခွငျးကိုလညျး သကျသာအောငျ ကူညီပေးတဲ့ဓာတျတဈမြိုးဖွဈပါတယျ။ ဗီတာမငျစီဟာ ကျောလဂငျြဓာတျမြားဖွဈလာဖို့အတှကျအရေးပါတဲ့ကုနျကွမျးပဲဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ လိမ်မျောသီး၊ သံပုရာသီးကဲ့သို့သော အရညျရှမျးတဲ့အသီးအနှံမြားကိုစားပေးသငျ့ပါတယျ။
၅. ဇငျ့ ဆိုတဲ့ အမြားအချေါ သှပျဓာတျ
ဇငျ့ဓာတျ(Zinc)ဟာ ခန်ဓာကိုယျရောငျရမျးခွငျးကိုသကျသာစပွေီး အနာကကျြမှုကိုအားပေးတဲ့ဓာတျတဈမြိုးဖွဈတဲ့အတှကျ အရပွေားကနျြးမာရေးကိုအထောကျအကူပေးပါတယျ။ ဒါကွောငျ့သငျ့ရဲ့အစားအသောကျထဲမှာ ငါး၊ မွပေဲ၊ အစအေ့ဆံမြားပါဝငျသငျ့ပါတယျ။
ဗီတာမငျအေ ပါဝငျတဲ့လိမျးဆေးတှဟော အမာရှတျကိုပြောကျကငျးသကျသာစပေါတယျ။ အကယျ၍ အစားအသောကျနဲ့ထိနျးသိမျးလို့မနိုငျတဲ့ အကွောပွတျရာတှရှေိနမေယျဆိုရငျတော့ တတျကြှမျးနားလညျတဲ့ဆရာဝနျမြားနဲ့တိုငျပငျကာ ကုသမှုခံယူသငျ့ကွောငျး တငျပွလိုကျပါတယျ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်တို့ ဗိုက်ကြောပြတ်တာသက်သာဖို့ လိုက်နာဖွယ်ရာအချက် (၆)ချက်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်တို့ အကြောပြတ်ခြင်းဟာ ဗိုက်အပြင် ပေါင်၊ တင်ပါးနဲ့ အချို့ ရင်ညွန့်နားထိရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုအကြောပြတ်တာ သက်သာဖို့အတွက် ဆောင်ရန်အချက် (၆)ချက်ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။
ကိုယ်အလေးချိန်များလေလေ ဝလေလေ ဗိုက်ကြောပြတ်မှုများလေလေဖြစ်တဲ့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်ဝိတ်အရမ်းမတက်စေအောင်ကြိုးစားပါ။ အနေတော်ကိုယ်အလေးချိန်တစ်ခုရအောင် အစားအသောက်၊ လေ့ကျင့်ခန်းတို့နဲ့ထိန်းညှိပေးပါ။
၂. သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရေဓာတ်လုံလုံလောက်လောက်ရှိနေပါစေ
ရေဟာ သဘာဝကပေးတဲ့အကောင်းဆုံး ဆေးတစ်ခွက်လို့ဆိုရင် မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ တစ်နေ့တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး ရေ နှစ်လီတာခွဲခန့် ပုံမှန်သောက်သုံးပေးမယ်ဆိုရင် အသားအရေကြည်လင်ပြီး အမာရွတ်များကိုအထိုက်အလျောက်သက်သာစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့အစားအစာထဲမှာ ဗီတာမင်ဓာတ်လုံလုံလောက်လောက်ပါရဲ့လား။ ဗီတာမင် စီ၊ ဗီတာမင် ဒီ နဲ့ ဗီတာမင် အီး တို့ဟာ အသားအရေပြုပြင်ထိန်းသိန်းရာမှာ အလွန်အထောက်အကူပြုတဲ့ဓာတ်တွေဖြစ်တာမို့ ဒီဓာတ်တွေပါတဲ့အစားအစာများကို စားသုံးပေးရမှာပါ။ ဒါ့အပြင် သွပ်ဓာတ်နဲ့ ပရိုတင်းဟာလည်း အမာရွတ်သက်သာရန်အထောက်အကူပြုတဲ့အတွက် အသားဓာတ်လဲလုံလောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
၄. ဗီတာမင် စီ
ကော်လဂျင် (Collagen)ဓာတ်ဟာ အသားအရေတွန့်ခြင်း နဲ့ အကြောပြတ်ရာများကို မဖြစ်ပွားအောင်၊ ရှိလက်စအကြောပြတ်ခြင်းကိုလည်း သက်သာအောင် ကူညီပေးတဲ့ဓာတ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဗီတာမင်စီဟာ ကော်လဂျင်ဓာတ်များဖြစ်လာဖို့အတွက်အရေးပါတဲ့ကုန်ကြမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လိမ္မော်သီး၊ သံပုရာသီးကဲ့သို့သော အရည်ရွှမ်းတဲ့အသီးအနှံများကိုစားပေးသင့်ပါတယ်။
၅. ဇင့် ဆိုတဲ့ အများအခေါ် သွပ်ဓာတ်
ဇင့်ဓာတ်(Zinc)ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုသက်သာစေပြီး အနာကျက်မှုကိုအားပေးတဲ့ဓာတ်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက် အရေပြားကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အစားအသောက်ထဲမှာ ငါး၊ မြေပဲ၊ အစေ့အဆံများပါဝင်သင့်ပါတယ်။
ဗီတာမင်အေ ပါဝင်တဲ့လိမ်းဆေးတွေဟာ အမာရွတ်ကိုပျောက်ကင်းသက်သာစေပါတယ်။ အကယ်၍ အစားအသောက်နဲ့ထိန်းသိမ်းလို့မနိုင်တဲ့ အကြောပြတ်ရာတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ဆရာဝန်များနဲ့တိုင်ပင်ကာ ကုသမှုခံယူသင့်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
Who’s the best: survival of the fittest during spelunking
Everted Umbilicus in Children